Imithetho yoqhawulo mtshato eLouisiana - Uqhawulo Mtshato Ngurhulumente
Imithetho yoqhawulo mtshato eLouisiana
Imithetho yoqhawulo mtshato eLouisiana ilawulwa ngu Isiqendu 103 Ikhowudi yaseburhulumenteni yombuso. Le mithetho ibeka iLouanaana njengepropathi yoluntu, ichaza ubude bexesha elithathayo ukufumana uqhawulo-mtshato, kunye nenkqubo yenkqubo yoqhawulo mtshato. Ukufaka ifayile yoqhawulo mtshato eLouisiana, ubuncinci iqabane elinye kufuneka lihlale kurhulumente ubuncinci Unyaka omnye . Isicelo soqhawulo mtshato kufuneka sifayilishwe kwiparadesi apho esi sibini sagqibela ukuhlala kunye.
Ukufaka ifayile yoqhawulo mtshato eLouisiana, amaqela anelungelo lokuqhawula umtshato nokuba kungasekelwa izizathu okanye uqhawulo-mtshato olungenazimpazamo. Imithetho yaseLouisana ngokumalunga 'nezizathu,' okanye izizathu zoqhawulo-mtshato ziyahluka ngokuxhomekeka kuhlobo lomtshato nokuba iqabane lifuna ukutyhola uhlobo olubi.
Ngokungafaniyo namazwe amaninzi, eLouisiana ' akukho siphoso Ukhetho loqhawulo-mtshato lufuna ukuba abatshatileyo bahlale ngokwahlukeneyo ixesha elithile. Amaqabane anokulandela uqhawulo-mtshato olungenasiphoso ukuba:
Baye bahlala bodwa ngokwahlukeneyo kangangeentsuku ezili-180 kwaye abanabantwana bancinci
Bebehlala ngokwahlukeneyo bodwa kangangeentsuku ezingama-365 kwaye banabantwana abasuka emtshatweni
ILouisiana inezizathu ezibini kuphela zokuqhawula umtshato. Bayakrexeza kwaye bayagwetywa. Ukuba enye yezi zinto iyasebenza kwimeko yakho, awunyanzelekanga ukuba ulinde ixesha elifunekayo ngaphambi kokuba uqhawule umtshato. Kufuneka iqatshelwe into yokuba isityholo sokukrexeza sinokuba nefuthe kwinkundla isigqibo sokuwongwa isondlo.
Njani abafana abanentloni ukubonisa umdla
UKUYA umtshato womnqophiso luhlobo olukhethekileyo lomtshato apho izibini zizinikela ekutshateni ngonaphakade. Ukungena kumtshato womnqophiso, abatshatileyo kufuneka batyikitye isibhengezo seenjongo zokufuna ingcebiso emtshatweni ngaphambi kokuqhawula umtshato. Ukongeza, izizathu zoqhawulo mtshato kumnqophiso womtshato zikhawulelwe koku kulandelayo:
Ukulahlwa okungenani unyaka omnye
Ukuxhatshazwa ngokwasemzimbeni okanye ngokwesondo kweqabane okanye abantwana
Ukuhlala ngokwahlukeneyo nokuhlala iminyaka emibini ubuncinci ngaphandle kokudibana
Ukuhlala ngokwahlukeneyo nangokwahlukana unyaka omnye (iinyanga ezili-18 ukuba kukho abantwana abancinci) ukusukela kumhla wokusayinwa ngokusemthethweni
Ngaphantsi komthetho waseLouisana, zimbini iintlobo zoqhawulo mtshato ezikhoyo. Ezi zimbini zahlukile iinkqubo , eyaziwa njenge-102 kunye ne-103 yoqhawulo mtshato, thabatha amagama abo kumacandelo ekhowudi abonakala phantsi kwawo. Ukugcwalisa iifom ezifunekayo, kuya kufuneka undwendwele inkundla yendawo okuyo.
UKUYA Uqhawulo mtshato oluyi-102 iyafumaneka kumaqela ekusafuneka ehlale ngokwahlukeneyo kwaye ahlukane nexesha elifunekayo. Ukuqala ngo-102 woqhawulo-mtshato, iqabane elifaka iifayile kufuneka lingenise uxwebhu lwezikhalazo. Emva koko, kuya kufuneka ayisebenzele kwiqela okanye afumane ukuyekiswa kwenkonzo. Amaqela ke kufuneka alinde de kudlule ixesha elifunekayo lokuqhubela phambili netyala labo. Nje ukuba banelise ixesha elifunekayo, kufuneka bafake isindululo sokucela inkundla ukuba ibanike ukuqhawula kwabo umtshato.
Izibini zinokulandela 103 uqhawulo-mtshato ukuba bahlala ngokwahlukeneyo kwaye bahlukane nobude bexesha elifunekayo. Nje ukuba uxwebhu lwezikhalazo luhanjiswe kwelinye iqabane, uneentsuku ezili-15 zokuphendula.
Kunqabile ukulandela Uqhawulo mtshato olunesiphoso , nangona kunjalo, ukuba ulandela oku, kuya kufuneka ufune igqwetha losapho. Qaphela ukuba ukukrexeza kufuneka kungqinwe ngamangqina amabini ongezelelweyo kwityala.
ILouisiana ngurhulumente wepropathi yoluntu. Oku kuthetha ukuba omabini amaqabane ane inzala elinganayo kuyo yonke ipropathi efunyenweyo kunye noxanduva olulinganayo lokuhlawula onke amatyala aqokelelwe ngexesha lomtshato. Ipropathi efunyenweyo okanye ityala elingene phambi komtshato, emva komhla wokwahlukana, okanye elifunyenwe ngexesha lomtshato kodwa ligcinwa lahlukile, alibandakanywanga kubalo lwepropathi yoluntu.
Umthetho waseLouisana uvumela iinkundla ukuba zinike isondlo, kodwa kuphela kwiimeko apho iqabane elifuna inkxaso libonisa zombini iimfuno zemali kunye nokungabikho kwayo nayiphi na indlela yokuziphatha gwenxa.
Urhulumente uvumela okokugqibela (okusisigxina) kunye nethutyana (okwethutyana) isondlo . I-alimony yexeshana ihlala isusela kwixesha elinikezelwa yinkundla de ibe iphelisiwe okanye kungene isigwebo sokugqibela soqhawulo mtshato. I-alimony esisigxina ihlala isusela kwixesha lokusekwa kwayo kude kube ngumhla othile, ukusweleka kweqabane, okanye ukuhlala komamkeli kwimeko efanayo nomtshato.
Xa ichonga inani lesondlo, inkundla ithathela ingqalelo oku kulandelayo izinto :
Ingeniso yabatshati kunye nezinye iiasethi
Ilungiselelo lokugcinwa komntwana
Inkxaso yentlawulo, ukuba ikhona
Impilo kunye nobudala bamaqabane
Umvuzo womntu ngamnye
Iziphumo zerhafu yebhaso
Kuya kuthatha ixesha elingakanani ukufumana iqabane elifuna inkxaso ukufumana imfundo, uqeqesho okanye ingqesho
Kwibhaso lokuxhasa umntwana okwethutyana inkundla inokujonga umgangatho wokuphila ngexesha lomtshato. Inkundla ayinakho ukunika isibonelelo semali esingaphezulu kwesinye kwisithathu somvuzo weqabane elihlawulelayo. Ukulungiswa kwebhaso lesondlo kunokwenziwa ukuba iimeko zomlingane ziguqukile; Eli lungiselelo alibandakanyi ukutshata kwakhona komlingane ohlawulekayo.
UkuGcinwa kwabantwana kunye neNkxaso
Xa abantwana bebandakanyeka kuqhawulo-mtshato, inkundla kufuneka ithathe izigqibo ezibalulekileyo malunga nokuba bazakuhlala phi, kunye nendlela abazali abaza kuzikhathalela ngayo iimfuno zabo zemali kunye neemvakalelo.
Njengamazwe amaninzi, iLouisana iyakuthanda ukugcinwa ngokudibeneyo . Iinkundla zaseLouisiana zithathela ingqalelo oku kulandelayo izinto xa kugqitywa indlela yokunikwa ilungelo lokugcina.
Ubudlelwane phakathi komntwana nabazali
Isakhono sabazali sokuthanda nokumkhokela umntwana
Ukukwazi kwabazali ukunika umntwana ukutya, impahla, unyango kunye nezinye izinto eziyimfuneko
Ixesha elichithwe ngumntwana kwindawo ehlala izinzile kwaye kungcono ukuba aqhubeke nemo engqongileyo
Uhlobo olusisigxina kwikhaya labazali
Ukuziphatha kakuhle kwabazali
Impilo yengqondo nengokwasemzimbeni yabazali
Ikhaya lomntwana, isikolo, kunye nembali yoluntu
Ukuzimisela komzali ngamnye ukukhuthaza umntwana wakhe ukuba abe nolwalamano nomnye umzali
Umgama phakathi kwamakhaya abazali
Inqanaba loxanduva oluboniswe ngumzali ngamnye emntwaneni
ELouisiana izikhokelo zenkxaso yomntwana yiyalela ukuba bobabini abazali banoxanduva lokufaka isandla kwintlalo-ntle yomntwana. Inkxaso ibalwa ngokusekwe kwimivuzo yabazali nakwinani labantwana. Inkundla inegunya loku guqula kancinane inkxaso yabantwana ukuba abazali bangabonisa ukuba iimeko zabo zitshintshile okanye inkxaso leyo ayisadingeki.
Uqhawulo mtshato waseLouisiana
Imithetho yoqhawulo mtshato yaseLouisana ingqongqo xa kufikwa kumgangatho wokuqhawulwa komtshato kungekho mpazamo, ukufaneleka kwesondlo, kunye namaxesha okufumana uqhawulo-mtshato. Nangona kunjalo, bavumela iijaji ukuba zikhethe ngaphandle, ngaloo ndlela ziqinisekisa ukuba onke amaqabane aphathwa ngokufanelekileyo.
Umculo Genres Iiproms Ukukhulelwa Nokusebenza Ulusu Care Product Ukukhathalela Ikati
injana ikhule nini ngokupheleleyo
iwayini enganambitheki njengotywala
mdala kangakanani kufuneka ube ne tattoo kwi-wisconsin
Yimalini ibhegi yesigcina-kufuma